UNESCO World Heritage Sites EYurophu | Gcina A Isitimela
ekhaya > Travel Europe > UNESCO World Heritage Sites EYurophu
IYurophu bandile sites UNESCO Heritage World ezithatha izigidi abakhenkethi. Kukho a ezahlukeneyo izinto ukubona - ukusuka kwizakhiwo zokwakha kunye nenkcubeko kwizikhumbuzo zendalo zelizwekazi elidala.
Ngeendawo ezininzi kangaka ukukhetha ukusuka, kunokuba nzima umhambi ukwenza isigqibo malunga indawo ekuyiwa kuyo. Ukunceda wena ukhethe ukuba zeziphi iisayithi UNESCO Heritage World eYurophu ukubona kuqala, senze uluhlu olufutshane:
Ezinye kakhulu langutana sites UNESCO Heritage World eFransi ziquka ebalulekileyo efana Versailles. Yeyona ndawo yokuhlala yobukhosi idumileyo kwaye ibalaseleyo Fransi . Enye yindawo entle ukukhankanya i Abbey Church of Saint-Savin-sur-Gartempe. It is a ibandla Romanesque ukususela ngenkulungwane 9 kwi Poitou, Aquitaine entsha.
Kuba abahambi abathanda ukubona izinto zonqulo, kukho kwakhona i Chartres Cathedral. Le mihla Cathedral Katolika yamaRoma ukususela ngenkulungwane ye-13, kwaye ningawufumana khona kumzantsi-ntshona Paris. Ekugcineni, Nantsi lapho Mont Saint-Michel kunye bay yayo. It sisiqithi ezinqatyisiweyo qhinga obusuka 8 AD, nge monastery njengoko yalo engundoqo, isakhiwo.
I-Paris ukuya eLyon Highspeed Train
UNESCO World Heritage Sites in ElamaTaliyane
Italy lizele sites UNESCO Heritage World, ngoko siza ubalule ezinye abo ezininzi ezaziwayo-kakuhle. Indawo yethu yokuqala yokumisa yi kwiindawo zakudala of Pompei, IHerculaneum, kunye noTorre Annunziata. nokubaluleka kwazo siyifumana kwinyaniso yokuba zezona iintsalela yamandulo needolophu bangcwatyelwa kuqhuma Mt. ntshava ku 79 AD. Kukho kwakhona Castel del Monte, Umbhalo enqabeni ukususela ngenkulungwane ye-13. Ekubeni uzekazekana impembelelo European Cistercian Gothic and Muslim bokwakha, kuyinto emehlweni umdla.
Ngaphezu, Kwakhona Italy likhaya Piazza del Duomo e Pisa, i okekeleyo odumileyo. Ekugcineni, kukhona ke yomlando amaziko yeedolophu ezinkulu ezimbini, Florence kunye eRoma. in Florence, izakhiwo abamele Renaissance indlela ezakhiwe ngayo kufuneka-ukubona. Musa akakuphosi Uffizi, Basilica of Santa Croce, kunye Florence Cathedral. in eRoma, kufuneka uhlole embindini uBukhosi baseRoma kunye nehlabathi yamaKatolika kunye nenani elikhulu ezikhumbuzo kunye inkcubeko.
Germany lilizwe elinezinto iinqaba, icawa, kunye nezinye iisayithi UNESCO Heritage World emangalisayo. ICahedral yaseAachen yindawo yokungcwaba iCharlemagne kunye nesakhiwo sokuqala esakhiweyo ukususela kudala. the eyona ndawo ithandwayo eJamani yenye icawa enkulu, lo enye e Cologne. Kwathatha ukwakha ukusuka 1248. Ngaphezu, imida yoBukhosi baseRoma nayo kufanelekile ukutyelelwa. Wonke umntu kufuneka ubone Hadrian Wall and Antonine Wall, leyo zakhiwa 122 AD kanye 142 AD, ngokulandelana.
Ukuphonononga Upper Middle iRhine Valley uza kuba ongasoze amava. Lo mmandla likhaya ezininzi kakhulu iinqaba needolophu ezisembalini. Ekugcineni, kukho baseWürzburg Residence kunye Gardens weNkundla kunye Residence Square. Le yenye iingxande ezinkulu Germany, umzekelo omkhulu isimbo yokuhlobisa.
Ezi nje ezimbalwa ezimangalisayo iindawo ezininzi UNESCO Heritage World eYurophu. Amacebiso zethu, awukwazi uhambe okungalungile nokuhlela uhambo lwakho. Uyakwazi ukufikelela ezi iindawo ngololiwe ukusuka ezinkulu ezahlukeneyo imizi yaseYurophu.
Ukulungele ukuhlola oko iYurophu ukuba anikele? Cwangcisa nokundwendwela langutana iziza UNESCO Heritage World kunye incwadi amatikiti etreyini yakho namhlanje!
Ingaba ufuna kuzakulungisa post yethu blog kwi sayithi yakho, ungakwazi noba uthathe iifoto zethu kunye nombhalo kunye nje zisinika ngetyala ngekhonkco kule post blog, okanye cofa apha:https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Funesco-world-heritage-sites-europe%2F%3Flang%3Dxh- (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)
europetravel longtrainjourneys trainjourney Tranride tips zokuhamba train travelfrance travelgermany travelitaly ongenco